Inona no atao hoe mpanoratra sy antony maha-zava-dehibe an'izany. Martech Zone
Inona no atao hoe mpanoratra ary nahoana no ilaina izany
Zoma, Febroary 17, 2012 Alahady Oktobra 4, 2015 Douglas Karr
Izaho dia nanimba ny mpanjifako ary efa fampidirana kaody mpanoratra amin'ny tranokalanay WordPress rehetra hatramin'ny nahitanao ny vokatra tsy mampino ny fanaovana izany amin'ny bilaoginay manokana. Ity misy infographic tsara hanampiana amin'ny fampiroboroboana ny mpanoratra an-tsoratra lavitra kokoa… fanoratana ny teny, MpanoratraRank.
Ho an'ny mpanoratra antonony, mpivarotra an-tsena na mpamokatra votoaty, manolotra tombony lehibe ho an'ny marika manokana i AuthorRank, fa kosa mahatonga antsika tsirairay ho tompon'andraikitra amin'ny kalitaon'ny asa vokarintsika. Asan'ny Google ny fanombanana ny kalitaon'ny atiny, ary mandroso amin'ny ho avy dia mazava fa mitady hanombatombana ny kalitaon'ny mpanoratra ny Google. Amin'ny fahazoana ny mpanoratraRank ankehitriny, ny mpanoratra dia afaka mametraka ny tenany sy ny vatan'izy ireo tafangona ho mendrika ny laharana. Infographic avy amin'i BlueGrass.
Ny habaka fotsy mangatsiaka ao amin'ny Infographic dia ho an'ity horonantsary manaraka ity:
Tags: mpanoratrarohy mpanoratraauthorrank-mpamoronabluegrassmarketing momba ny mangabokympanoratra relserp
Ny antsasaky ny orinasa Polled dia manana pejy Google+
21 Mey 2012 tamin'ny 6:51 hariva
Liana aho hahafantatra ny fomba fampiasana rel = ”mpanoratra” ho an'ny orinasa.
21 Mey 2012 tamin'ny 6:55 hariva
Salama @carrinli: disqus! Amin'ny fampisehoana miharihary ireo mpanoratra 'orinasa, ny orinasanao dia afaka manangana fahefana. Ny tahan'ny tsindry amin'ny fidirana amin'ny motera nosoratana dia mazàna avo kokoa satria hitan'izy ireo fa tsy bot na tranokala spam, noho izany dia hahasarika mpitsidika bebe kokoa avy amin'ny motera fikarohana ianao. Hitanay ny fanatsarana marobe ny isan'ny olona manindry ny lahatsoratry ny bilaogy avy amin'ny motera fikarohana hatramin'ny nandraisanay rohy mpanoratra.
Apr 4, 2012 ao amin'ny 4: PM PM
Ka somary tsy mazava aho - afaka Mampiasa ilay infographic amin'ny tranokalanay ve izahay ary mampiditra ilay horonantsary - sa inona no fikasanao? Tena milay, BTW - ary lohahevitra mafana tokoa.
Apr 4, 2012 ao amin'ny 5: PM PM
Natao hozaraina ry Jeanette! Ity iray manokana ity dia novolavolain'i BlueGrass… ireo olona tia mizara azy ireo… raha mbola misaotra fatratra miaraka amina rohy mifandraika miverina amin'ny tranokalan'izy ireo ianao!